HDD ​ထဲ​က D ​တစ်​ပိုင်း​ပျောက်​နေ​လို့ ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
HDD ​ထဲ​က D ​တစ်​ပိုင်း​ပျောက်​နေ​လို့
kaungchanmyae972@gmail.com : ​မ​င်္ဂ​လာ​နှစ်​သစ်​ပါ ​ကို​ညီ ​နှစ်​သစ်​ကူး​မှာ ​အ​ရှုပ်​ပေး​တယ်​လို့​တော့​မ​ထင်​ပါ​နဲ့ ​အ​ကို​ညီ ​ကျ​နော့် ​စက်​မှာ drive D ​မ​ပေါ်​တော့​လို့ ​ဘာ​ဖြစ်​တာ​လဲ​အ​ကို... ​အ​ရင်​က window7enterprise ​တင်​ထား​တာ​ပါ ။ ​အဲ​ဒီ​တုန်း​က drive C ​က​ဖွင့်​လို့​မ​ရ​ဘူး ။ ​အဲ​ဒါ​နဲ့ window7Ultimate ​ပြောင်း​တင်​လိုက်​တာ.။ ​လမ်း​ညွှန်​အ​တိုင်း ​ဘဲ​လုပ်​ပါ​တယ်။ window loader run ​လိုက်​ပီး​ရင်​တော့​ခ​ဏ​လေး​ပေါ်​လာ​တယ်။ ​ပီး​တော့​ပြန်​ပျောက်​သွား​တယ်။ ​ကွန်​ပျူ​တာ​ကို right click ​လုပ်​ပီး​တော့ manage ​ထဲ​က​နေ disk management ​ကို​ဖွင့်​ကြည့်​ရင်​တော့ drive ​က​ရှိ​နေ​ပါ​တယ်.။ ​အဲ​ဒါ ​ကွန်​ပျူ​တာ​ထဲ​မှာ drive D ​ပေါ်​လာ​အောင်​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မ​လဲ ​အ​ကို....။
​ကျွန်​တော်​လဲ ​တစ်​ခါ​ဖြစ်​ဖူး​ပါ​တယ် . ​အဲ့​ဒါ​ကြောင့်​မို့​လို့ ​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မယ်​ဆို​တာ​ကို ​ရေး​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် . ​ဓါတ်​ပုံ​နဲ့​တော့ ​မ​ပြ​တော့​ပါ​ဘူး . ​အ​ခု​ပြော​ပြ​တာ​ကို ​နား​မ​ရှင်း​သူ​များ ​ပြော​ပါ ​ဓါတ်​ပုံ​နှင့်​ပြန်​တင်​ပေး​ပါ​မည်။
my computer ​ကို right click ​ထောက်​ပြီး​တော့ manage ​ထဲ​ကို ​ဝင်​လိုက်​ပါ .
​ပြီး​ရင်​တော့ Storage ​ရဲ့ ​အောက်​က Disk Management ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ ..
​ပျောက်​နေ​တဲ့ Drive ​ပေါ်​ကို right click ​ထောက်​ပြီး​တော့ change Drive latter and paths ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ .
​ပြီး​ရင်​ပေါ်​လာ​တဲ့ box ​ထဲ​က​နေ Change ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ . ​အဲ့​ထဲ​က C ​နှင့် D ​မ​ဟုတ်​တဲ့ ​တစ်​ခြား drive latter ​ကို ​ရွေး​ပြီး​တော့ OK ​ပေး​လိုက်​ပါ . ​ပျောက်​နေ​တဲ့ Drive ​ပေါ်​လာ​တာ​ကို ​မြင်​တွေ့​ရ​မှာ​ပါ .
​အား​လုံး​ပဲ ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ်​လို့​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ် .
​နေ​မင်း April 30, 2011 at 4:26 PM
​ဖိုး​သား May 1, 2011 at 10:05 AM
BkIttY May 23, 2011 at 7:35 AM
​ကို​ညီ​ရေ.................. iPhone 3G Custom Restore Firmware42 1 8C148 ipsw rar ​လို​ချင် ​လို့ ​ကျေး​ဇူး ​တင် ​ပါ​တယ်
nay lin htun May 30, 2011 at 10:08 PM
Thz ,a lot brother.
I can solve my external HDD cann't format new partition.
I use home premium window764-bit.
a lot of useful software didn't match my window.
May U be happy.
phyo May 30, 2011 at 10:55 PM
​ကျ​နော့် english mp3 ​သ​ချင်း​တွေ​ဖွင့်​ထား​ပြီး
​အောက်​မှာ karaoke ​လို​မျိုး ​စာ​သား​လေး​ပေါ်​လာ​အောင် ​လုပ်​ချင်​လို့​ပါ..​ကျ​နော်​ဘယ်​လို​ဆက်​လုပ်​ရ​မယ်​ဆို​တာ​ကို ​အ​ကူ​အ​ညီ​ပေး​ပါ​ဦး...။ ​အား​ကိုး​ပါ​တယ်....
Saw Tun October 20, 2011 at 1:20 PM
​ကို​ညီ​ရေ ​ကျွန်​တော့်​ရဲ့ external hard disk ​က ​အ​လုပ်​မ​လုပ်​လိှု့​ဗျာ။my computer ​မှာ shortcut ​ကို ​ပေါ်​မ​လာ​တော့​ဘူး။ ​ကျွန်​တော် ​ကွန်​ပျူ​တာ ​လေး​ခု​လောက် ​စမ်း​ကြည့်​ပြီး​ပြီ ​မ​ရ​ဘူး​ဗျာ။ ​အ​ထဲ​မှာ ​အ​ရေး​ကြီး​တဲ့ ​ဖိုင်​တွေ ​ပါ​တဲ့​အ​တွက် ​ဘယ်​လို​များ ​လုပ်​လို့​ရ​မ​လဲ​ဆို​တာ ​လမ်း​ညွှန်​ပေး​ပါ​အုံး။ ​အား​ကိုး​ပါ​တယ်​ဗျာ။ ​ကျေး​ဇူး​အ​များ​ကြီး ​တင်​ပါ​တယ်။
HP Pavilion tx1000 CTO Windows XP Driver
chrome.exe ​ကို ​သတ်​လို့​မ​ရ​လို့